बोलीमा मात्रै होईन ओलीमा ठूलो दम छ, १० लाख कोरोना खोप आजै आउँदैछ – Himalitimes
बोलीमा मात्रै होईन ओलीमा ठूलो दम छ, १० लाख कोरोना खोप आजै आउँदैछ
२०७७ माघ ८ ०७:५३ मा प्रकाशित
काठमाडौं । नेपाल सरकारको पहलमा भारत सरकारले अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराएको १० लाख मात्रा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप आज (बिहीबार) काठमाडौं आइपुग्दै छ । सो खोप जोखिममा खटिएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता निर्धारण गरेर उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा गठित खोप सल्लाहकार समितिका संयोजकसमेत रहेका खोपविज्ञ डा. श्यामराज उप्रेतीका अनुसार भारतबाट अनुदानमा ल्याइने कोभिसिल्ड भ्याक्सिन प्रत्येक व्यक्तिलाई दुई मात्रा दिइन्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले खोप लगाउँदा कुनै समस्या देखिए उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने बताए । उनले भने, ‘खोप लगाउँदा कुनै समस्या देखिए उपचार सरकारले गर्छ । त्यसका लागि हामी तयारी अवस्थामा छौं ।’ नेपालको कानुनमा खोप लगाएपछि खोपकै कारण कुनै घटना घटे क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छ ।
खोपलाई दुईदेखि आठ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा ६ महिनासम्म भण्डारण गर्न सकिन्छ । खोप लगाउन कसैलाई पनि बाध्य नपारिने र फराम भर्न लगाएर मात्रै खोप उपलब्ध गराइने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गर्भवती, सुत्केरी, पहिलो मात्रा दिँदा समस्या देखिएका व्यक्तिलाई (दोस्रो मात्रा नदिने), १८ वर्ष उमेर समूह मुनिकालाई खोप दिन नमिल्ने खोप विज्ञहरू बताउँछन् । यस्तै, सिकिस्त बिरामीलाई अवस्था हेरेर केही दिनपछि पनि खोप उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
हालसालै भारतमा सेरम इन्स्टिच्युटको कोभिसिल्ड र भारत बायोटेकको कोभ्याक्स खोप प्रयोगमा आएको छ । सो खोप एक जनाले दुई डोज लगाउनुपर्नेछ । पहिलो चरणमा ५ लाख नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराइनेछ । नेपालको कुल जनसंख्याको ७२ प्रतिशत नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउनेछ ।
कानुनी, प्रशाशनिक, आर्थिक र प्राविधिक समस्या हल भइसकेको र खोप लगाउन सम्पूर्ण तयारी सम्पन्न भएको छ ।
थप खोप खरिद प्रक्रियासमेत सरकारले अगाडि बढाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार जिल्ला अस्पतालमा बुथ राखेर खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । प्रत्येक बुथबाट खोप उपलब्ध गराइनेछ । खोप अभियानलाई सफल बनाउन ८ हजार स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिँदै छ । खोप कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्ला जिल्लामा तालिम भइरहेको छ । गत शुक्रबार नेपालले भ्याक्सिन आयातमा आपतकालीन स्वीकृति दिएको थियो ।
नेपाल सरकारको पहलमा भारत सरकारले नेपाललाई अनुदानमा दिने भनिएको कोरोनाविरुद्धको खोप १० लाख डोज (मात्रा) उपलब्ध गराएको छ । नेपालमा आउने खोप कोभिसिल्ड हो ।
खोप अभियानका लागि सबै तयारी पूरा भइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीले नेपाल र भारतबीच मित्रताको अनुपम उदाहरण भएको भन्दै आगामी दिनमा खोप खरिदमा पनि सहयोग गर्ने अपेक्षा राखेको बताए । उनले खोप ल्याउन आर्थिक, प्रशासनिक र प्राविधिक जटिलता नभएको बताए ।
आजको मौसम : घाम लाग्ने संभावना कम, तराईमा बिहान र दिउँसो बाक्लो हुस्सु लाग्ने
कोरोना खोप काठमाडौं आईपुग्यो, एक हप्ताभित्र लगाइसक्ने गरी तयारी